ပြခန်း-ဓာတ်ပုံ Viewer ကို, ဓာတ်ပုံ Folder ကို, အယ်လ်ဘန် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဓါတ်ပုံပညာ Apps ကပ » ပြခန်း-ဓာတ်ပုံ Viewer ကို, ဓာတ်ပုံ Folder ကို, အယ်လ်ဘန်, Images ကို
ပြခန်း-ဓာတ်ပုံ Viewer ကို, ဓာတ်ပုံ Folder ကို, အယ်လ်ဘန်, Images ကို APK ကို
ပြခန်းသန်း 200 ကျော်အသုံးပြုသူများသည်နှင့်အတူ VideoShow app ကို၏တူညီသောအဖွဲ့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးထားသည်။ ပြခန်း HD ကိုကိုအကောင်းဆုံးအစားထိုးဓာတ်ပုံကိုပြခန်းအခမဲ့ပြောင်းလဲနေသောဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်, ပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုသူ, ရုပ်ပုံများအယ်လ်ဘမ်ဓာတ်ပုံကြည့်ရှုသူ, ဓါတ်ပုံဖိုင်တွဲ, ဆလိုက်ရှိုးထုတ်လုပ်သူ, သင့်ပုံရိပ်တွေဘို့ဓာတ်ပုံရိုက်အယ်ဒီတာနှင့်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာနှင့် videos.It အာဏာအရှိဆုံးသောဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသည်, ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို browser ဖြစ်ပါတယ် 3D အမြင်များ, ဓာတ်ပုံကိုမန်နေဂျာကအမြင့်ဆုံးအသုံးပြုသူ rated ဓာတ်ပုံကိုပြခန်းတဦးရဲ့အတူဓာတ်ပုံကိုပြခန်း! ဒါဟာလုံးဝအခမဲ့, မြန်ဆန်ပေါ့ပါးပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမျှဝေဖို့ပြောင်းလဲနေသောဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်, ဆလိုက်ရှိုးများနှင့်ကောင်းတဲ့အတိုဗီဒီယိုများဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ပြခန်းလည်းသင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုမှရောင်စုံဆောင်ပုဒ်နှင့်ခေတ်မီဒီဇိုင်းကို add, သင်နေရာလွတ်ကိုကူညီပေးပါတယ်။
နယူးဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာနှင့်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ features တွေထည့်သွင်းထားပါသည်:
- Instagram ကိုသို့မဟုတ်အခြား social media ကိုထိန်းညှိဖို့သီးနှံဓာတ်ပုံများ။
- ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသော filter များနှင့်သင်၏ဓာတ်ပုံများကို Edit ။
- အရောင်အဝါဆန့်ကျင်ဘက်, ရွှဲ, ထိတွေ့မှု, အရိပ်, ပျေါလှငျသို့မဟုတ်သေံချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်သင့် selfies တင့်တယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံးပြခန်းပုံရိပ်တွေအပေါ်အလှတရားကင်မရာဆိုးကျိုးများကိုသုံးပါ။
- သင်၏ဓါတ်ပုံများစံပြဖြစ်စေလျက်, ကို aperture, သန့်ရှင်းသောအလင်း, Vignette သို့မဟုတ်ပြတ်သားညှိထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင့်ဓါတ်ပုံကိုပြင်ဆင်ရန်။ ဒါဟာနောက်ဆုံးပေါ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူလှပသော 3D ပြခန်းပါပဲ။
- ဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအစွမ်းထက်: သင် sort နိုင်ပါတယ် / အမည်ပြောင်း / share / delete / မိတ္တူ / ရုပ်ပုံများကိုရွှေ့။ ဒါမှမဟုတ်သီးနှံ / / လှန်ပုံရိပ်တွေကိုလှည့်။ အလွယ်တကူတိုက်ရိုက်ပြခန်းမှနောက်ခံပုံအဖြစ်ကြိုက်နှစ်သက်မဆိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံခန့်ထား၏။
- ဗီဒီယိုတွန်း: ဖြတ်, ချုံ့, ဖုန်းရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုကယ်တင်ရန်သင့်ဗီဒီယိုများချုံ့။
- ဗီဒီယိုမီးမောင်းထိုးပြ: လွယ်ကူစွာအသစ်ဓာတ်ပုံကိုဖိုလ်ဒါဖန်တီးသင့် timeline ဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမှတ်တမ်းတင်တစ်ဆလိုက်ရှိုးကိုဗီဒီယိုအဖြစ်ကသူတို့ကိုရှုမြင်ကြသည်။
- န့်အသတ်ဓါတ်ပုံများနှင့်ချောမွေ့ user interface ကိုနှင့်အတူဆလိုက်ရှိုးကာတွန်း။
- ပုံများ / ဗီဒီယို / ဆလိုက်ရှိုးရက်စွဲ, အရွယ်အစား, အမည်, တက်လျက်ရှိနေသည်ကိုသို့မဟုတ်ဆင်းနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်ခွဲထားခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။ သင်လိုချင်တဲ့တဦးတည်းကိုရှာဖွေဘို့လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်စွာ။
- Browse scan နဲ့ဖိုင်တွဲအားဖြင့်သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုစုစည်းပြီး။ အားလုံးပုံရိပ်ကိုပုံစံများနှင့်ဗီဒီယိုကို formats လူကြိုက်များ JPG နဲ့တူ, JPEG, ပူးတွဲငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီ၏, png, gif, bmp, wbmp, mpo, webp, 3gp, 3gpp, 3g2, AVI, mp4, MKV, MOV, m4v, MPEG, asf, DivX, flv ထောက်ခံပါသည် , k3g, စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်, MTS, rm, rmvb, skm, TS, WMV ။
- သင်ဆုံးဖြတ်ကြောင်းသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ရန်အတွက်အယ်လ်ဘမ် Play ။
- ပြောင်းလဲနေသောဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်, ဂီတဗီဒီယိုနှင့်အေးမြဆလိုက်ရှိုးလုပ်ပါ။
- အလိုအလျောက်ဖြစ်ရပ်များ, နေ့စွဲ, အချိန်နှင့်တည်နေရာအရသိရသည်အားလုံးသင်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများစည်းရုံး။ ပြခန်း HD ကိုအတူသင်တို့တစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်ဖြည့်ဖို့ပုံရိပ်တွေကိုပြသနိုင်ပါလိမ့်မည်။ - သင်ကပိုအသေးစိတ်အမြင်ရရန်ဖြစ်တော့-to-zoom ကိုလက်ဟန်ခြေဟန်သို့မဟုတ် zoom ကိုခလုတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
- က Ultra အစာရှောင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို browser & ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသူ
- အကောင်းဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံး themes များဆလိုက်ရှိုးဗီဒီယိုများသာယာလှပဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
- အဆိုပါဗီဒီယိုများ 4P resolution နဲ့ mp720 အဖြစ်တင်ပို့နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အခိုက်အများနှင့်ဘဝပုံပြင်, HD အရည်အသွေးထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
စသည်တို့ကို Youtube ကို, Facebook, Instagram ကို, Whatsapp, လိုင်း, WeChat, G + Kakao, ဗိုမှသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအခိုက်အမျှဝေပါ
ပြခန်း VideoShow ကဲ့သို့အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုမပေးသညျ။ ဒါဟာထိပ်တန်း rated အခမဲ့ဓာတ်ပုံကြည့်ရှုသူ / ဓာတ်ပုံကိုဖိုင်တွဲ / ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ / ဓာတ်ပုံကို browser ကို / image ကိုကြည့်ရှုသူ / ပြောင်းလဲနေသောဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ် / ဆလိုက်ရှိုးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမြန်ဆန်အလင်းနှင့်ခေတ်သစ်ပါပဲ။
သငျသညျ, Videoshow ပြခန်း ပတ်သက်. သတင်းကျေးဇူးပြုပြီးသိရန်လိုပါလျှင်
Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: http://www.facebook.com/flickmoment
ကြှနျုပျတို့၏ website သို့သွားရောက်မှကြိုဆိုပါသည်: http://www.videoshowapp.com
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါက flickmoment@enjoy-mobi.com အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ
- Bug ပြုပြင်မှုများနှင့်အသေးစားတိုးတက်မှု
ပြခန်း-ဓာတ်ပုံ Viewer ကို, ဓာတ်ပုံ Folder ကို, အယ်လ်ဘန်, Images ကို
13.38 ကို MB
EnjoyMobi Video Editor & ဗီဒီယိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုစတူဒီယို